मान्छेको इतिहासमा प्रतिशोधले जति क्षति अरु केहीले गरेको छैन । यसकै कारण भयानक युद्धहरु भएका छन्, हत्या भएका छन् । विरलै मान्छेमात्र प्रतिशोधबाट माथि उठेका छन्, तिनीहरु मानव सभ्यताकै लागि उदाहरणीय बनेका छन् । गान्धीका हत्यारा नाथुराम गोड्से र गान्धीपुत्रको पत्रव्यवहार हामी चाख मानेर पढ्छौं । यस्तै, कठोर पीडा खेपेर पनि प्रतिशोध नसाध्ने नाम हो ः सृष्टि रेग्मी । समयले उनलाई कठिन र विशिष्ट मोडमा ल्याइपु¥याएको छ । जहाँबाट उनलाई… पुरा पढौ
देश नै आँशुको मार्गमा हिंडिरहेको छ – रवीन्द्र समीर
रवीन्द्र समीर नेपाली साहित्यको चर्चित नाम हो | लघुकथा विधाको पर्याय रहेका रवीन्द्र समीर नियात्रा तथा संस्मरणमा उत्तिकै जमेका छन् | हाल उनको बाह्रौं कृतिको रुपमा मृत्युको आयु ( उपन्यास ) चर्चाको शिखरमा छ | उपन्यास लेखनमा चलिरहेको धारलाई परिवर्तन गरि नयाँ धार तथा संबेदनशील बिषयमा अनुसन्धानमुलक उपन्यास लेखेको कारण मृत्युको आयु पाठकको रोजाइमा परेको छ | मृत्युको आयु अरब गएर काठको बाकसमा फर्किएको युवाको कथा हो | यसै बिषयमा… पुरा पढौ
नोभेल एकेडेमीले सञ्चालन गरेका शैक्षिक कार्यक्रम के–के छन् ? नोभेल एकेडेमीलाई गण्डकी प्रदेशकै उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य बनाउन पाउँदा हामी निकै हर्षित छौं । पछिल्लो समय विद्यार्थीको बढी रुचि भएका र बजारमा माग भएका विषयहरूको अध्यापनमा हामीले जोड दिएका छौं । सोही अनुसार विद्यार्थीको आकर्षण पनि निकै उत्साहजनक छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा प्रत्येक वर्ष स्नातकतर्फ बिएस्सी नर्सिङ, बिफार्मेसी, बिबिएको पढाइ भइरहेको छ । स्नातकोत्तरतर्फ एमबिएको पढाइ हुन्छ । पोखरामात्र नभएर… पुरा पढौ
झट्ट हेर्दा दुब्लो शरीर । कालो चश्मा । औपचारिक पहिरन कालो सुटमा ठाटिने विवश बलिभद्र कोइराला कुशल गजलकार हुन् । समाजमा उनी आफूलाई यही उपमाले चिनाउन चाहन्छन् । उनका गजल मन छुने खालका हुन्छन् । उनी प्रेम र समसामयिक विषयवस्तुलाई समेटेर गजलमा उतार्ने गर्छन् । प्रस्तुत छ बालिका थपलियास“ग उनले गजलको बारेमा गरेको कुराकानीः गजल के हो ? किन लेख्नुहुन्छ गजल ? मेरो विचारमा गजल मनका भावनाहरुको लयात्मक प्रस्तुति हो… पुरा पढौ
पुस्तक प्रकाशन गर्नु आफैंमा चुनौतिपूर्ण कार्य हो । यो चुनौतिलाई स्वीकार्न तयार भएकी छिन् यमुना पराजुली अधिकारी । उनी नेपालका औंलामा गन्न सकिने महिला प्रकाशकमध्ये एक हुन् । इटरनल पब्लिकेसनको नामले उनले पुस्तक प्रकाशित गरिरहेकी छिन् । जुनसुकै काम पहिलो पटक गर्न गाह्रो हुन्छ तर पछ्याउन सजिलो । जोखिमस“ग जुधेर अरुलाई पछयाउन सजिलो बनाएकी छिन् यमुना । ३६ वर्षको उमेरमा यात्रा गरिरहेकी उनी चुनौतिले भरिएको काम गर्न मन पराउ“छिन् ।… पुरा पढौ
जवानीमा धेरै खेलकुद खेलियो । सुटिङ छोडेर आर्चरीमा पाईला लम्कियो । रिटायर्ड पछि पहिचान बनाउने खेल आर्चरी बन्यो । त्यसभन्दा अघि सुटिङ नै थियो । सुटिङ र स्वीमिङ दुवैमा अब्बल । जीवनको रसरंग भने आर्चरीमै बस्यो । किन ! पल्टने लाईफ सकियो, रिटायर्ड लाईफमा आर्चरीसँगै जोडियो अन्य खेल भने विदेशमै छोडियो । उमेरले आराम खोज्ने बेला हो । तर मनले मान्दैन् । त्यसैले त छ दशक उमेरमा पनि उस्तै युवा… पुरा पढौ
चित्रबहादुर केसी नाम सुन्ने बित्तिकै स्थानीय लबजमा खाँट्टी कुरा गर्ने नेताको तस्बिर हामी सामु आउँछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उपप्रधानमन्त्रीसम्म बनेका उनी संघीयताका भने 'मुख्य दुस्मन' नै हुन् । संघीयता खारेज नगरे यसले देश नै खारेज गर्छ भन्ने केसी एक बिहान राजनीतिभन्दा जीवनका फरक पाटाबारे कुराकानी गर्न तयार भए । ७९ वर्षका राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष केसीको राजधानीमा आफ्नो घर छैन । बागलुङमा भएको घरको ठेगाना पनि अहिले गलगोट नगरपालिका भएको… पुरा पढौ
उपन्यासकार मीनराज बसन्त आख्यान बजारमा चलेका लेखक हुन् । मुदिर उपन्यास आएको तीन वर्षमा अर्को उपन्यास पिपिरी आएपछि किताब बजारमा उनको उपस्थिति बलियो बनेर रहेको छ । अनलाइन तथा छापामा नियमित लेखिरहने उनी विशेषगरी आख्यान बिधामा कलम चलाउँछन् । फिनिक्स बुक्सबाट प्रकाशित उनको पछिल्लो उपन्यास `पिपिरी´ चैत महिनामा सार्वजनिक भएपछि देश बिदेशमा यो पुस्तकको चर्चा बढ्दै गएको छ । पुस्तकको परिचर्चा कार्यक्रममा दौरानमा लेखक बसन्त पनि व्यस्त छन् । गत… पुरा पढौ